Maxkamadaha Dalka Oo Baddalaya Hannaanka Gal-dacweedyada soo gaara – Kalfadhi
Maxkamadaha Dalka Oo Baddalaya Hannaanka Gal-dacweedyada soo gaara
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Baashe Yuusuf Axmed oo u warramay Warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegay in maanta oo Arbaca ah 11-ka bishaan Luulyo laga billaabo uu ka dhaqan gali doono maxakamadaha dalka hannaan cusub oo lagu keydiyo gal-dacwadeedyada yalla maxakmadaha.
Baashe ayaan weydiinnay waxa hannaankan cusub uu ka baddali karo dhibaatooyinkii ka jiray garsoorka iyo maxkamadaha dalka. Waxa uuna sheegay in isku daygaan uu cusubyahay ayna ugu tala galeen in ay ku maamulaan dacwadaha soo galaya maxkamadda, ayna hadda si tijaaba ah ugu billaabi doonaan maxkamadda sare iyo maxakmadda Gobolka Banaadir iyo tan rafcaanka ee isla gobolka.
Baashe waxa uu inoo sheegay hannaanka cusub oo ah mid elektaroonik ujeedkiisu yahay in laga dhigo shaqada garsoorka mid hufan isla markaana daahfuran, oo isla xisaabtan leh.
Nidaamkan waxa uu sahlayaa in lala socdo dhaqdhaqaaqa iyo tallaabooyinka ay qaadayaan garsoorka iyo maxakamadaha markaas gacanta ku haya gal-dacweedka, waxayna u sahleysaa madaxda garsoorka in uu ogaan karaan magaca garsooruha, gal-dacweedka uu gacanta ku hayo iyo howsha uu ka qabtay inta ay la egtahay.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare Baashe Yuusuf Axmed waxa uu Kalfadhi u sheegay in qaabkaan cusub uu la dagaalamayo waqtiyada dheer ee ay qaataan dacwadaha oo dadku cabasho badan ka keeneen, waxa kale oo uu xoojinayaa la dagaalnka musuqa mar walba lagu xanto in uu ka dhex jiro garsoorka, sidoo kale guddoomiyaha ayaa inoo sheegay in hannaankan uu cusub oo yahay mid u wanaagsan dadweynaha oo ay yaraan doonto xogaha ama warq dacwadeedka lumeysa.
Dacwadaha ugu badan ee hadda garsoorka ag yaalla ayuu ku sheegay Baashe in ay la xariiraan dhulalka la isku heysto, dowlahada hoose ayuuna sheegay in qayb ay ka yihiin murannadaas waxa uuna ugu baaqay in ay xaqiijiyaan cidda ay siinayaan caddeynta lahaansha dhulka.
Guddiyada dib u eegista Dastuurka oo faragalin ka cabanaya